‘सञ्जु’ ले पैसा धेरै कमायो कि आलोचना ? — Harpraharnews.com
‘सञ्जु’ ले पैसा धेरै कमायो कि आलोचना ?
२३ असार २०७५, शनिबार July 7, 2018 हरप्रहर न्युज
बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तको जीवनमा आधारित फिल्म ‘सञ्जु’ ले बक्स अफिसमा तहल्का पिटिरहेको बेला सामाजिक सञ्जालमा भने आलोचनाको शिकार बनेको छ । खासगरी फिल्मका निर्देशक राजकुमार हिरानीमाथि दर्शकहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।
विवादित अभिनेता सञ्जय दत्तको छवि सुधार्नका लागि हिरानीले यो फिल्म बनाएको आरोप छ । बायोपिक फिल्म भनिए पनि बायोपिकमा हुनुपर्ने पूर्णता सञ्जुमा छैन । यसले सञ्जय दत्तको जीवनका सबै पक्षलाई छुन सकेको छैन । उनी आतंकवादी नभएको प्रमाणित गर्नमा फिल्म लक्ष्यित देखिएको छ ।
एक प्रयोगकर्ताले व्यंग्य गर्दै लेखेका छन्, ‘ड्रग्सको लतका लागि साथी जिम्मेवार, हतियार उठाउनमा अन्डरवल्र्डको डर जिम्मेवार, आतंकवादी भनिनुमा मिडिया जिम्मेवार । सञ्जय दत्त आफ्नो कुनै गल्तिका जिम्मेवार छैनन् ।’
धेरैले हिरानीका अघिल्ला फिल्महरुको स्तरमा सञ्जु नरहेको पनि टिप्पणी गरेका छन् । हिरानीका थ्री इडियट्स, मुन्नाभाई एमबीबीएस, पीके जस्ता फिल्महरुमा पाइएको कमेडी यो फिल्ममा देख्न नपाइएको उनीहरुको भनाई छ ।
यद्यपि, फिल्मको प्रशंसा गर्नेहरु पनि धेरै छन् । खासगरी रणवीर कपुरले गरेको अभिनयले धेरैको तारिफ बटुलेको छ ।
व्यापारिक रुपमा सञ्जुले किर्तिमान कायम गरेको छ । यसले तेस्रो दिन करिब ६७ करोडको व्यापार गरेर सो किर्तिमान राखेको हो । फिल्मले सञ्जय दत्तका फ्यान र रणवीरका फ्यानलाई आकषिर्त गरेको छ । आम दर्शकहरुका लागि भने फिल्म खासै रुचिकर छैन ।
कहाँ चुक्यो ओली सरकार ? माइतीघरमा !
सेक्स अफर नमान्दा मैले धेरै फिल्म गुमाएँकी छु : मल्लिका सेरावत
ओलीको गृहनगरमा राप्रपा र कांग्रेसी उम्मेद्वारको अग्रता कायमै
आज उभौली, बालीनाली लगाउन अघि प्रकृतिको पूजा गर्दै किराती समुदाय
आज २५६६औं बुद्ध जयन्ती
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आज उद्घाटन हुँदै
माङसेबुङ गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेका राई र उपाध्यक्षमा जसपाका नेम्बाङ विजयी
माङसेबुङ ३ मा माओवादीका जनम खम्बुकाे अग्रता